Namaly fahafaham-po i Siri tamin'ny 52.3% amin'ireo fangatahana natao tamin'ny fitsapana ny HomePod | Avy amin'ny mac aho
Araka ny fitsapana fitsikilovana virtoaly farany nataon'ny orinasa Fihaonambe, Ny HomePod an'ny Apple dia manome valiny mahafa-po mihoatra ny antsasaky ny fanontaniana apetratsika. Ny fanandramana dia notanterahina tamin'ny toe-javatra samihafa sy ny kalitaon'ny feo, ny fanamorana ny fampiasana ny fitaovana ary ny hafainganam-pandehan'ny valiny, ankoatra ireo toetra azo refesina hafa, dia nosedraina.
Na dia, araka ity fanadihadiana ity aza, Siri amin'ny HomePod dia nahafantatra tsara ny 99.4% tamin'ireo fangatahana natao, 52.3% amin'izy ireo ihany no namaly tsara, amin'ny fanontaniana 800 eo ho eo amin'ny HomePods 3 samihafa.
Raha ampitahaina amin'ireo mpifaninana aminy, Tsy nivadika ho tsara i Siri: Amazon Alexa 64% no nahavaly fahafaham-po, Google Home nahatratra 81%, ary Cortana avy amin'i Microsoft, dia marina tamin'ny 57% tamin'ireo tranga ireo. Amin'ny tabilao etsy ambany dia afaka jerentsika ny valiny amin'ny sokajy izay navoakan'ity fandinihana ity mazava:
Raha ny valin'ity fanadihadiana ity dia Mihatsara amin'ireo mpanohitra azy i Siri rehefa angatahina lohahevitra mozika ary koa ny fanadihadiana eo an-toerana toy ny serivisy fisakafoanana na fivarotana eo akaiky eo. Amin'ny fanontaniana ankapobeny kokoa, ny mpanampy an'i Apple dia mbola tsy mifanaraka amin'ny andrasana.
Nanazava ny mpikaroka amin'ity fanadihadiana ity fa ny HomePod sy i Siri dia tokony hitombo rehefa mandeha ny fotoana hampifanaraka na handresy ireo mpanatrika mpifaninana ary tsy hametra ny tenanao hanampiana fotsiny ny fangatahana "anatiny" amin'ny kalandrie, mailaka, antso, fitetezana GPS, ary ireo rindranasa hafa zanatany.
Inona no miavaka ao amin'ny HomePod raha oharina amin'ireo mpifaninana, dia ny fahaizana mandray ny feon'ny mpampiasa amin'ny volavola mahazatra, na dia mitendry mozika miaraka amin'izay aza, na raha mibitsibitsika zavatra metatra miala amin'ny fitaovana ilay mpampiasa. Tena tsy mitovy amin'ireo mpifaninana aminy voalohany io fampiasa io.
Ankoatra izany, Ny kalitaon'ny feo amin'ny "kilalao" vaovao an'i Apple dia voamarina fa mahavariana. Madio ny feo ary mihoatra ny fanantenana rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Namaly fahafaham-po i Siri tamin'ny 52.3% amin'ireo fangatahana natao tamin'ny fitsapana HomePod